ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရန်အချက်ကိုးချက် - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်အားလုံးသည်လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏သင်္ချိုင်းတွင်းကိုတူးခဲ့ကြပါပြီ။ ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်လမ်းသည်သင်၏ပုံပြင်များနှင့်မတူပါ၊ ငါနံနက်သစ်သားရှိခဲ့သည့်နောက်ဆုံးအချိန်အခါမှတ်မိနိုင်ဘူး။ ငါဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်နဲ့သွားတယ်။ အားလုံးပုံမှန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျကျပုံရတယ်၊ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ငါ့ရဲ့စိတ်ပညာပျက်နေတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏မိန်းကလေးနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးကိုကျွန်ုပ်လက်ခံချင်သည်ထက် ပို၍ ထိခိုက်ခဲ့ပြီးကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ပါ။ လူတစ် ဦး သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများသည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်သင်၏စိတ်ကိုသဘာဝမကျစွာနေထိုင်ရန်နည်းလမ်းများကိုသင်ကြားပေးသောအန္တရာယ်ရှိသောအလေ့အကျင့်များဖြစ်ကြောင်းလက်ခံရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ Siren's Melody ကဲ့သို့ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်းသည်၎င်းသည်မထင်မှတ်လောက်အောင်ကြီးလွန်းလှသည်။ t ကိုမဆိုအကျိုးဆက်များရှိသည်ဖို့ပုံရသည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်သေလောက်အောင်သေချာသောထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်သတိပြုမိချိန်ကနောက်ကျလွန်းနေသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်မှန်ကန်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တာကိုပြောချင်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လဲကျသွားတဲ့အခြားသူတွေကိုသတိပေးဖို့နဲ့ကူညီဖို့တာ ၀ န်ပဲလို့ငါထင်တယ်။
၁ - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကကျွန်ုပ်တို့၏လိင်တံနှင့် ဦး နှောက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏လက်သည်ယောနိဖြစ်ကြောင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဗီဒီယိုမှမိန်းကလေးများသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းအမျိုးသမီးများနှင့်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံသည်ဟုယုံကြည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်တံနှင့် ဦး နှောက်ကိုသင်ပေးခဲ့သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကစိတ်ကိုယုံကြည်သည်ကိုယုံကြည်သည်၊ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ အမှန်တရားမှာယောနိသည်လက်နှင့်ကွဲပြားသည်၊ ပို၍ ပျော့ပြောင်းပြီးစိုစွတ်သည်၊ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်၊ မျှမျှတတပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ဖွဲ့စည်းပုံသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ထို့အပြင်သင်အမှန်တကယ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံလျှင်သင့်လက်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အနေဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရွေ့လျားစေသည့်အရာဖြစ်သည်။ အဘယ်အရာကိုခန့်မှန်း? တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းတွင်အသုံးပြုသောအမြန်နှုန်းကိုမိန်းမတစ်ယောက်နှင့်သော်လည်းကောင်း၊ အခွင့်အရေးတစ်ခုမှသော်လည်းကောင်းမရနိုင်ပါ။ တစ်နည်းပြောရရင်အခြေခံအားဖြင့်လိင်တံနဲ့သင့် ဦး နှောက်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကသင်အမှန်တကယ်မိန်းမနှင့်လိင်ဆက်ဆံရသည့်အခြေအနေနှင့်ကြုံတွေ့ရသောအခါသင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်သင့်စိတ်သည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသွားသည်ဟုသင်ကြားပြီးနောက်။ အစအ ဦး တွင်“ အတွေ့အကြုံအသစ်” ဖြစ်ချိန် မှစ၍ သင်၏စိတ်ကရိုက်ချက်တစ်ခုပေးခဲ့သော်လည်းအတွေ့အကြုံအသစ်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်မကြာမီပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ လိင်တံနှင့်စိတ်သည်ဤ“ အသစ်နှင့်ထူးဆန်းသော” လိင်ပုံစံကိုလက်မခံပါ။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ သင်အမှန်တကယ်သင်ကိုယ်တိုင်အရှိန်မြှင့်နေကြောင်းသိရန်လမ်းမရှိသော။ ယခုမူကား၊ သင်သိသောအကျင့်၊ ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်သည် ဖြစ်၍၊
၂။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံကိုကြည့်ချင်သောဆန္ဒက“ ချွတ်ချွတ်ရန်” အမှားအယွင်းဆုံးနှင့်ဖျားနာနေသောဗီဒီယိုကိုလိုအပ်သည့်အဆင့်သို့ရောက်သွားသည်။ ရပ်တန့်ဖို့အချိန်ပြီ; ငါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကံကြမ္မာကိုယူဖို့အချိန်တန်ပြီ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ သဘာဝလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်သဘာဝမဟုတ်သောနည်းလမ်းများမရှိတော့ပါ။ သင်ကသင်၏မိန်းကလေး၊ မိန်းမကိုအကြွေးတင်နေသည်၊ သင်ကိုယ်တိုင်ထိုကြွေးတင်နေသည်။ ၎င်းသည်နောက်ကျလွန်းနိုင်သည်။ သို့သော်ယုံကြည်သူများနှင့်လုပ်ဆောင်ရန်မျှော်လင့်ချက်များရှိသေးသည်။ သင့်မှာဒီထင်ယောင်ထင်မှားပြုမှုလောကကိုစွန့်ခွာဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရှိရမယ်။ မင်းသတိထားမိလားမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကနုပျိုတာမရှိဘူး၊ ဒီကင်ဆာနဲ့တစ်မိနစ်လောက်မဆုံးရှုံးတော့ဘူး။
3.- ဒါဟာလွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သို့သော်အခြားအဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်းနေရသည့်အရာသည်ရကျိုးနပ်ပါသည်။ သင်၏စိတ်ဝိညာဉ်အတွင်း၌လဲကျ။ အခြားသူများအပေါ်မှီခိုမနေပါနှင့်။ အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါ၊ သင်ဖြစ်ချင်တာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ။
4.- ဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာယူပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းစေခဲ့သည်။ သင်လာမည့်လများနှင့်အတူသင်၏စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကိုခံစားရလိမ့်မည်။ ကိုယ်ခန္ဓာသည်စိတ်ယုံကြည်မှုကိုယုံကြည်သည်နှင့်ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနှင့်။ ဆက်လုပ်ပါ အပြည့်အဝပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်၊ သို့သော်လအနည်းငယ်အတွင်း၊ ၃ လမှ ၆ လအထိသင်မကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုကိုသင်ရိပ်မိလိမ့်မည်၊ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုနောက်ကွယ်မှထားခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အခြားစွဲလမ်းသူများနှင့်အတူတူပင်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်ကိုသတိပြုပါ။ သင်သည်သင်၏လိင်တံသေးငယ်သည့်အလားတွေ့လိမ့်မည်။ သင်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်သေသွားသည့်ကာလကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေစေရန်သေချာစေရန်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကြိုးစားပါလိမ့်မည်။ အမှား။ ထိုဖြစ်စဉ်ကိုဆုတ်ခွာခြင်းဟုခေါ်ဆိုပြီး၎င်းသည်လုံးဝပုံမှန်ဖြစ်သည်။ သငျသညျနောက်ဆုံးမှာ "မှော်" ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ အချင်းလူ၊ သင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသေရမည်အကြောင်း၊ ဒါဟာဖြစ်ပျက်မယ့်ခဲ့ကြောင်းပဲသိသာသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာများသည်စကြဝuniverseာတစ်ခုလုံးတွင်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံး“ စက်” ဖြစ်ပြီးသင်စိတ်ရှည်ပါကကုသနိုင်သည်။ သင်သတိထားရမည့်အခြားအရာတစ်ခုမှာသင်၏စိတ်သည်မင်းကိုလှည့်စားလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်မိုက်မဲခြင်းသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ထပ်မံကျဆင်းသွားနိုင်လျှင်သင့်စိတ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသောပထမဆုံးအတွေးမှာဤသို့ဖြစ်သည် -“ ငါစပြီးစလုပ်ရမယ်။ နောက်တစ်ခါထပ်မစခင် porn / masturbation ပါတီပွဲလုပ်ကြစို့” ။ သင့်ကိုယ်သင်စိစစ်ခြင်း၌သင်၏ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုဖြစ်မနေပါနှင့်။ အရာကဲ့သို့သောအရာများ -“ ဒီတစ်ကြိမ်တည်း”၊ “ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြည့်လိုက်ရုံ”၊ “ ငါကညစ်ညမ်းရုပ်သံကိုကြည့်ရှုမယ်၊ ဒါပေမဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးတော့မလုပ်ဘူး”၊ ဒီလိုစကားလုံးတွေဟာအရှုံးသမားတွေအတွက်ဖြစ်ပြီးစကားမပြောနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ သင်တိုက်တွန်းချက်သည်အလွန်ကြီးသည်ဟုခံစားရပါကထွက် သွား၍ မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုရှာ။ သင်ကုသခံထားရမှုရှိမရှိကြည့်ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးအဲဒါကိုဘယ်လိုသိလဲ
၅။ စိတ်သည်ပျက်စီးမှု၏ ၉၀% ကိုသိမ်းယူထားပြီး၎င်းသည်သင်လျစ်လျူရှုရန်မတတ်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ တွေးတောဆင်ခြင်ဖို့လိုသည်, အပြုသဘောဆောင်အတည်ပြုချက်များလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ကြည့်ပါ၊ အပျက်သဘောဆောင်သောအတွေးအခေါ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကခံစားချက်အတိုင်းအတာ = ကြောက်ရွံ့မှုအဖြစ်လက်ခံထားသည်။ ယခုသင်သိသင့်အဖြစ်။ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနှင့်ပတ်သက်လျှင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်အင်အားအကောင်းဆုံးစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ဒါဟာသင့်ကိုနှိပ်စက်လိမ့်မယ်။ သင်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်သင်၏အပြုသဘောထားစဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၌အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။ သင်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအနှစ် ၅၀ လုံးလုံးမကြည့်လျှင်ပင်၊ သင်ကိုယ်တိုင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အလုပ်မလုပ်လျှင်၎င်းသည်ခြားနားမှုမရှိပါ။ ဒီစိတ်ဟာမင်းစိတ်ကူးကြည့်လို့မရနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်လှသည်။ ၎င်းကိုသင်၏အားသာချက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင့်ကြောက်ရွံ့မှု၏သားကောင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာကဘာကိုယုံကြည်တယ်။
(၆) စိတ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လုပ်ချင်တာကိုလုပ်နိုင်တယ်လို့မဆိုလိုပါ။ အရူးမဖြစ်နဲ့ အာဟာရနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းသည်သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ထင်သည်ထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။ Testosterone ဟော်မုန်းသည်အဟာရဓာတ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤနယ်ပယ်တွင်ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်သော်လည်းအင်တာနက်ပေါ်တွင်ဖတ်ခြင်းသည်သင့်စိတ်ကူးထားသည့်အတိုင်းသတင်းအချက်အလက်များစွာကိုပေးနိုင်သည်။ သွပ်သည်အရေးကြီးပါသည်။ အဆီကောင်းများသည်အခွံမာသီး၊ ဗာဒံသီး၊ သင်၏ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည့်အစားအစာများကိုရှာဖွေပြီးသင်ရှောင်ရှားသင့်သည့်အစားအစာများကိုရှာဖွေပါ။ ကောင်းစွာအိပ်ပျော်ပါ၊ Cardio လုပ်ပါ၊ သို့သော်သင့်ကြွက်သားများကြီးထွားရန်မမေ့ပါနှင့်။ ငါအားကစားရုံမထင်မှတ်အောင်ဖြစ်လာဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ငါပြောသမျှအားလုံးဟာမင်းတို့သုတေသနလုပ်ပြီး testosterone ဟော်မုန်းဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်၊ သဘာဝနည်းလမ်းတွေနဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးကိုမသုံးဘူးဆိုတာကိုကြည့်သင့်တယ်။ ယောက်ျားတွေ၊ ငါတို့မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုထားခဲ့ဖို့ကြိုးစားနေတာ၊
၇.- သန်းနှင့်ချီသောမိန်းကလေးများသည်ယောက်ျားတစ် ဦး အားအပြည့်အဝကျေနပ်ရောင့်ရဲစေမည့်ယောက်ျားတစ် ဦး ကိုစောင့်မျှော်နေကြသည်။ သင်မည်သည့်အုပ်စုတွင်ဖြစ်စေ၊ Alfa အုပ်စုတွင်သို့မဟုတ် Beta (ရှုံးနိမ့်သူ) အုပ်စုတွင်ပညာရှိစွာရွေးချယ်ပါ။ သင့်အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ငါဒံယေလနှင်းဆီမှသင့်တော်သောအတွေးအခေါ်ရှိရန် - စာအုပ်စာအုပ်ကိုသင့်အားအကြံပေးလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်ကိုငါကျိန်ဆိုပြီ။
၈။ - သင်၏စိတ်သည်ယခင်စိတ်ဒဏ်ရာအတွေ့အကြုံများကိုတိကျသောလူများနှင့် / သို့မဟုတ်နေရာများနှင့်ဆက်စပ်လိမ့်မည်ဟုသင်သဘောပေါက်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ငါဒီမှာပြောဖို့ကြိုးစားနေတာကမင်းမှာမကောင်းတဲ့လိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့ရင်မင်းရဲ့စိတ်ကသူတိုကိုမှတ်မိပြီးလူတယောက်ဆီကိုပြန်ပြောပြလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သတိပြုပါ။ ခင်ဗျားရဲ့ခင်ပွန်း၏ဇနီးကိုခင်မင်တော့တာကိုမခံစားရဘူးလို့သင်ယုံကြည်ရင်၊ ဒါကအကြောင်းပြချက်ပဲ။ တဖန်သင်အမှန်တကယ်ဂရုစိုက်ပါက၊ ထိုလူကိုသင်အမှန်တကယ်ချစ်ပါကသူမနှင့်စကားပြောရန်နှင့်အခြေအနေကိုရှင်းပြရန်လိုအပ်သည်။ ဒီဟာကိုပြုပြင်လို့ရပေမယ့်လွယ်ကူမှာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုကျော်လွှားရန်အခက်ခဲဆုံးအရာဖြစ်သည်။ သို့သော်ငါပြောခဲ့သလိုပင်လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်စိတ်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးစက်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအချိန်နှင့်အတူအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေပါလိမ့်မယ်။
အောင်မြင်မှုအတွက် 9. -THE KEY ကိုဇွဲ IS ။ သင်တသမတ်တည်းမရှိစိတ်ရှည်ခြင်း, မရှိခြင်းရှိပါကပြတ်လိမ့်မည်။
မှ ဒီ medhelp ချည်